ခရီးသွားခံနီးတိုင်းအ၀တ်စားအသစ်ဝယ်မှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ် က လေးကို ဖျောက်ရ အောင်… – Trend.com.mm
ခရီးသွားခံနီးတိုင်းအ၀တ်စားအသစ်ဝယ်မှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ် က လေးကို ဖျောက်ရ အောင်…
Posted on February 16, 2019 February 14, 2019 by Shun Lei Phyo
မိန်း က လေးတွအများစု အဖြစ်များတဲ့ ကိစ္စကြီးပါပဲ။ ခရီးသွားတိုင်း အ၀တ်စားအသစ်တွေကို မ၀ယ်ပဲမနေနိုင်…ကိုယ့်မှာရှိပြီးသားပင်မဲ့ ဒီခရီးအတွက် ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ မလိုအပ်ပဲ အ၀တ်စားတွေဝယ်ရင်း ငွေကုန်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်တာ ဟာ ငွေကုန်မှန်းသိပင်မဲ့လည်း စိတ်ထဲကကို အကျင့်ကြီးပါနေကြတာပါ။ ဒီလို ခရီးတစ်ခုသွားခံနီးတိုင်းမလိုအပ်ပဲ အင်္ကျီအသစ်တွေ ပစ္စည်းအသစ်တွေ ၀ယ်မိတဲ့ အကျင့်ဆိုးလေးကို ဖျောက်ပစ်ဖို့ ဒီလိုစိတ်မျိုးလေးတွေထားပြီး Try ကြည့်ရအောင်….
(၁) ခရီးမှာ တကယ်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဟုတ်မဟုတ်တွက်ချက်ပါ(ခရီးစဉ်မှာ မပါမဖြစ်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုပဲဦးစားပဲဝယ်ယူပါ)
(၂) ကိုယ့်မှာ ရှိတဲ့အ၀တ်စား တွေကို ဘီရိုဖွင့်ပြီးသေချာရွေးပါ( ကိုယ့်မှာတကယ်တော့အ၀တ်စားတွေအများကြီးရှိပါတယ် ခရီးသွားမယ်ဆိုတဲ့အတွေးသာမရှိရင် ၀ယ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး ဒါကြောင့်ရှိတဲ့အ၀တ်တွေထဲကအဆင်ပြေမဲ့အရာတွေကိုဦးစွာရှာပါ)
(၃) ပိုက်ဆံပိုရင် ခရီးမှာ ကိုယ်ဝယ်ချင်တာတွေဝယ်လို့ရနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့အတွေးထည့်ထားပါ(ခရီစဉ်မှာလည်းကိုယ်လိုချင်တာတွေ အမှတ်တရလက်ဆောင်တွေဘာတွေညာတွေရှိအုံးမှာပါပဲ)
(၄) ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဘာဝတ်ဝတ်လှတယ် လို့သတ်မှတ်ယုံကြည်ထားပါ(ဘာဝတ်ဝတ်လှတယ်လို့ယုံကြည်စိတ် သင့်ကိုအကုန်ကျသက်သာစေပါတယ် :-P)
(၅) Budget Save ဖြစ်တဲ့ခရီးတစ်ခုကသင့်ကို ပိုပြီကျေနပ်စရာကောင်းပါတယ်။ ခရီးသွားခြင်းမှာ အ၀တ်စားကအဆင်ပြေဖို့ပဲလိုပါတယ်၊သိပ်ပေါ်လွင်နေဖို့မလိုပါဘူး။ ဒါကြောင့် လိုအပ်လို့ဝယ်တာတွေပဲ ၀တ်ဆင်ပြီးမလိုအပ်ပဲ စိတ်အလိုလိုက်တဲ့ အလကားကုန်မဲ့ကိစ္စမျိုးကို လျော့ချတာအကောင်းဆုံးပါပဲ။
ကဲ…ဒီနည်းလမ်းလေးတွေကအနည်းငယ်အသုံးဝင်မယ်ဆိုရင်တောင် ငွေကုန်ကြေးကျနည်းနည်းသက်သာတာမလို့ ခရီးသွားတိုင်းအသစ်တွေချည်းဝယ်ချင်နေတဲ့ အကျင့်လေးကို လျော့ချနိုင်ကြပါစေနော်…
မိနျး က လေးတှအမြားစု အဖွဈမြားတဲ့ ကိစ်စကွီးပါပဲ။ ခရီးသှားတိုငျး အဝတျစားအသဈတှကေို မဝယျပဲမနနေိုငျ…ကိုယျ့မှာရှိပွီးသားပငျမဲ့ ဒီခရီးအတှကျ ဆိုတဲ့စိတျနဲ့ မလိုအပျပဲ အဝတျစားတှဝေယျရငျး ငှကေုနျတတျကွပါတယျ။ ဒီလိုလုပျတာ ဟာ ငှကေုနျမှနျးသိပငျမဲ့လညျး စိတျထဲကကို အကငျြ့ကွီးပါနကွေတာပါ။ ဒီလို ခရီးတဈခုသှားခံနီးတိုငျးမလိုအပျပဲ အကငြ်ျီအသဈတှေ ပစ်စညျးအသဈတှေ ဝယျမိတဲ့ အကငျြ့ဆိုးလေးကို ဖြောကျပဈဖို့ ဒီလိုစိတျမြိုးလေးတှထေားပွီး Try ကွညျ့ရအောငျ….
(၁) ခရီးမှာ တကယျလိုအပျတဲ့ပစ်စညျးတှဟေုတျမဟုတျတှကျခကျြပါ(ခရီးစဉျမှာ မပါမဖွဈဆိုတဲ့အရာတှကေိုပဲဦးစားပဲဝယျယူပါ)
(၂) ကိုယျ့မှာ ရှိတဲ့အဝတျစား တှကေို ဘီရိုဖှငျ့ပွီးသခြောရှေးပါ( ကိုယျ့မှာတကယျတော့အဝတျစားတှအေမြားကွီးရှိပါတယျ ခရီးသှားမယျဆိုတဲ့အတှေးသာမရှိရငျ ဝယျဖွဈမှာမဟုတျပါဘူး ဒါကွောငျ့ရှိတဲ့အဝတျတှထေဲကအဆငျပွမေဲ့အရာတှကေိုဦးစှာရှာပါ)
(၃) ပိုကျဆံပိုရငျ ခရီးမှာ ကိုယျဝယျခငျြတာတှဝေယျလို့ရနိုငျတဲ့ဆိုတဲ့အတှေးထညျ့ထားပါ(ခရီစဉျမှာလညျးကိုယျလိုခငျြတာတှေ အမှတျတရလကျဆောငျတှဘောတှညောတှရှေိအုံးမှာပါပဲ)
(၄) ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ဘာဝတျဝတျလှတယျ လို့သတျမှတျယုံကွညျထားပါ(ဘာဝတျဝတျလှတယျလို့ယုံကွညျစိတျ သငျ့ကိုအကုနျကသြကျသာစပေါတယျ :-P)
(၅) Budget Save ဖွဈတဲ့ခရီးတဈခုကသငျ့ကို ပိုပွီကနြေပျစရာကောငျးပါတယျ။ ခရီးသှားခွငျးမှာ အဝတျစားကအဆငျပွဖေို့ပဲလိုပါတယျ၊သိပျပျေါလှငျနဖေို့မလိုပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ လိုအပျလို့ဝယျတာတှပေဲ ဝတျဆငျပွီးမလိုအပျပဲ စိတျအလိုလိုကျတဲ့ အလကားကုနျမဲ့ကိစ်စမြိုးကို လြော့ခတြာအကောငျးဆုံးပါပဲ။
ကဲ…ဒီနညျးလမျးလေးတှကေအနညျးငယျအသုံးဝငျမယျဆိုရငျတောငျ ငှကေုနျကွေးကနြညျးနညျးသကျသာတာမလို့ ခရီးသှားတိုငျးအသဈတှခေညျြးဝယျခငျြနတေဲ့ အကငျြ့လေးကို လြော့ခနြိုငျကွပါစနေျော…
၀ိတ်ချဖို့ပျင်းတယ်ဆိုတဲ့သူလေးတွေတောင် ၀ိတ်ကျသွားစေနိုင်မယ့် နည်းလေးတွေ…